Madaxa La Liga Oo Doonaya In Jurgen Klopp, Jose Mourinho Uu Ku Arko Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Madaxa La Liga oo doonaya in Jurgen Klopp, Jose Mourinho uu ku...
Madaxweynaha La Liga Javier Tebas ayaa sheegay inuu doonayo inuu soo jiito xiddigaha adduunka ugu fiican iyo tababarayaasha madax ka noqda heerka ugu sareeya Spain, oo ay ku jiraan maamulayaasha Liverpool iyo Tottenham Jurgen Klopp iyo Jose Mourinho .
Tebas ma uusan qarin rabitaankiisa ah inuu uu arko tabarayaasha Premier League ku guuleystay xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay wuxuuna aaminsan yahay in Spain ay qasab ku tahay inay heysato tayada kubada cagta – garoonka dhexdiisa iyo banaankiisaba .
“Waxaan marwalba dooneynaa waxa ugu fiican. Waxaan doonayaa Jose Mourinho, Pep Guardiola , Jurgen Klopp, … kuwaas oo dhan waxay naga caawin lahaayeen inaan horyaalka kor u qaadno,” ayuu yiri Tebas.
Si kastaba ha noqotee, wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan ka tagista Messi ee Barcelona ayaa sii socota ka dib markii uu ku dhawaaday inuu ka tago kooxda iyadoo lala xiriirinayo Manchester City, halkaasoo Guardiola dhawaan uu saxiixay qandaraas cusub.
Previous articleEdinson Cavani ayaa raaligalin ka bixiyay fariin muran dhalisay oo uu soo dhigay baraha bulshada
Next articleisku aadka Koobka FA Cup Wareegiisa 3 aad oo lasoo saaray